Momba anay - Zhangjiagang City Daking Jewellery Co., Ltd.
Mpamatsy vokatra vita amin'ny perla avo lenta miorina amin'ny rojom-barotra sy marika rehetra. Ny DAKING Jewellery dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1992 tao amin'ny Zhangjiagang, tanàna misy seranan-tsambo akaikin'ny Shanghai, manamorona ny reniranon'i Yangzi. Nanomboka teo dia nivadika ho mpamatsy karazana voahangy isan-karazany isika. Anisan'izany ny famokarana, famolavolana ary fanondranana firavaka poara, firavaka volafotsy, firavaka volamena ary firavaka vato semi-sarobidy ary firavaka akanjo lamaody.
28 taona niainana
DAKING Jewellery dia natokana ho amin'ny hatsarana sy kalitao ho an'ny firavaka perla rehetra sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Nandritra ny 28 taona, izahay dia natokana ho an'ny fampandrosoana sy ny fampiasana perla miaraka amina fomba fiasa matihanina, tompon'andraikitra, mahomby ary manavao. Miaraka amin'ny finoana tsara, eritreritra ary laza tsara amin'ny fitantanana, dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana ny Indostria Voahangy amin'ny siansa, teknolojia, mizana ary marika isika. Amin'ity fotoana ity dia nanompo mpanjifa maro eran'izao tontolo izao izahay izay mitady ny tsara indrindra Perla tsara kalitao. Ny firavaka tsirairay dia vita tanana ary namboarina.
Ny fitomboantsika dia mitohy amin'ny vokatra vaovao novolavolaina mitohy. Ny hatsarana amin'ny kalitao. Fahombiazana amin'ny vidiny. Tombony amin'ny serivisy. Mandany fotoana be amin'ny fisafidianana, famakafakana ary famoronana firavaka tsirairay izahay satria tianay ny hanompoana anao amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra ihany. Tianay ianao handeha miaraka amin'ny firavaka perla vaovao izay azonao antoka fa faly sy faly.
Aaa Voahangy Rano, Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano, Kavina fampakaram-bady, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Kavina Stud Perla, Voahangy marina anaty rano velona,